बैंकद्वारा करिब ५७ करोड कर्जा प्रवाह - बैंकद्वारा करिब ५७ करोड कर्जा प्रवाह
बैंकद्वारा करिब ५७ करोड कर्जा प्रवाह
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ३१ श्रावण, 09:23:05 AM
उर्लाबारी, मोरङ । कृषि विकास बैंक उर्लाबारी शाखाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु. ५७ करोड ५७ लाख ८५ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
सो बैंकले गत आवमा रु ५० करोड कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत आवमा रु. ४४ करोड ५० लाख कर्जा असुली गर्ने लक्ष्य लिएकामा रु ५४ करोड ६१ लाख ५९ हजार असुली गरेको बैंकका प्रबन्धक रक्षक रायले जानकारी दिए ।
२०७५, ३१ श्रावण, 09:23:05 AM